DFS & Alshabaab ayaa si qarsoon isaga kaashanaayo ladaagalanka xoogaga ilaalinta dimuqraadiyada - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka DFS & Alshabaab ayaa si qarsoon isaga kaashanaayo ladaagalanka xoogaga ilaalinta dimuqraadiyada
DFS & Alshabaab ayaa si qarsoon isaga kaashanaayo ladaagalanka xoogaga ilaalinta dimuqraadiyada
Warar si hoose u heshay MOL ayaa sheegayaa in DFS oo wakiil ka ah NISA & Kooxaha dhiiga shacabka ku raadiya dhaqaalo ee Alshabaab ayaa iska kaashanaayo sidii ay ula dagaalami lahayeen xoogaga ilaalinta dimuqraadiyada dalka kuwaaso kasoo horjeeda in la boobo doorashooyinka Qaranka.
MW Farmaajo oo ayka dhamaatay kalsoonida uu ku qabo shacabka soomaaliyeed ineey markale dooran doonaan ayaa bilaabay inuu xoog ku raadiyo sidii uu xoogaga wadaniyiinta & alshabaab uga dhigi lahaa xildhibaano.
Ciidamada ilaalinta dimuqraadiyada dalka ee ku sugan Gobolada Shabeelada Hose , dhexe & banaadir ayaa maalmaha soo socda waxaa kuso wajahan weerar uga imaanayo argagaxisada alshabaab oo fulineeysa Amarka Agaasimaha NISA Fahad Yaasiin.
Hadii weerarkaasi dhacana wuxuu cadeen u yahay isku milanka alshabaab & NISA oo sanadihi udanbeeyay so shaacbaxay .
Muxuu yahay heshiiska is afgarad ee Doorashada aay gaareen “Jubaland iyo Beesha Caalamka”
Trump oo si fool xun uga baxay Aqalka Cad, warqadna u dhaafay Biden
Baarlabaanka JFS “Madaxweyne waxaan kaa rabnaa caddeeymo ciidanka loo diray Eriteriya”